तपाईं यौ'न आनन्दको अन्तिम खुडकिलोसम्म पुग्न असफल भइरहनुभएको छ ? च रम आनन्दभन्दा अघि नै चिसिनुहुन्छ ? अमेरिकामा गरिएको अनुसन्धानअनुसार महिलाले चाहे हरेक पटक च'रसुख उठाउन सक्छन् ।त्यसको लागि धैर्यता र यौ नसाथी बीच उचित तालमेल हुनु जरुरी छ । अनुसन्धानले हरेक पटक महिलाले च रम सुख लिन सक्ने देखाएको छ । तर ग'र्भधारणका.....
धेरैलाई थाहा नभएको यौ’न सम्ब’न्धका ४ चरण
अध्ययन अनुसार से'क्स'का ४ वटा चरण हुन्छन् । सुरुको भावनामा आउने, नजिक आइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्ने चरण ‘एराउजल’ हो । यस चरणमा छोरी मान्छेको ‘ए'राउजल’ ढिलो आउँछ तर छोरा मानिसको ‘एरा'उजल’ छिटो आउँछ र त्यसको तादात्म्यता नमिलेको खण्डमा पनि तना'व उत्पन्न हुन्छ । पहिलो चरण भनेको उत्ते'जना अर्थात् एक्साइटमेन्ट.....
महिला आफ्ना पतिसँग दिनहुँ यौ'न सम्बन्ध राख्न इच्छुक हुँदैनन् । यसो हुनुको एउटा महत्त्वपूर्ण कारण यौ'न साथी आफूभन्दा पहिले चर'म आ'नन्दसम्म पुग्नु तपाईं यौ'न आनन्दको अन्तिम खुडकिलोसम्म पुग्न असफल भइरहनुभएको छ ? च'रम आनन्द (अ'र्गाज्म) भन्दा अघि नै चिसिनुहुन्छ ? अमेरिकामा गरिएको अनुसन्धानअनुसार महिलाले चाहे.....